प्रधानमन्त्री के सहजै हिडडुल गर्न सक्दैनन् ? | Safal Khabar
प्रधानमन्त्री के सहजै हिडडुल गर्न सक्दैनन् ?
औपचारिक कार्यक्रममा सुरक्षाकर्मीको टेकोमा देखिन्छन्, प्रधानमन्त्री । तर सल्लाहकार र नीजि चिकित्सक भन्छन्, – ‘प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य सामान्य नै छ ।’
शुक्रबार, ०३ असोज २०७६, ०९ : १८
तस्वीर : काठमाडौंपोष्टबाट साभार
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको र नियमति काममा खटिन सक्ने उनका निजि चिकित्सक र सचिवालयका सदस्यहरुले बताउँदै आएका छन् ।
प्रधानमन्त्री स्वयं समेत आफ्नो दैनान्दिन कार्यक्रममा सक्रिय सहभागिता जनाई नै रहेका छन् । भलैं त्यस्ता सक्रियता वालुवाटार बाहिर भन्दा पनि भित्रैबाट प्रधानमन्त्री ओलीले बढाईरहेका छन् ।
२० भदौंमा दोश्रो पटक सिंगापुरमा उपचार गराई फर्केपछि प्रधानमन्त्री ओली खासै वालुवाटार वाहिरका कार्यक्रममा सहभागी छैनन् । तीन चार पटक मात्र उनी वालुवाटार वाहिर निस्केका छन् ।
आजैं मात्र प्रधानमन्त्री ओली संविधान दिवस मूल समारोह समितिले आयोजना गर्ने विशेष समारोहमा सहभागी भईरहेका छन् ।
नत्र उनी सार्वजनिक कार्यक्रममा भन्दा आन्तरिक काममै लागिरहेको देखिन्छन् । उनले वालुवाटारमै आफुलाई केन्द्रीत गर्ने, त्यहीबाट दैनान्दिनका कामहरु गर्ने गर्दै आईरहेका छन् । यतिसम्मकी उनी २० भदौंमा स्वदेश फर्के यता दुई पटक मन्त्रिपरिषद्को बैठक समेत वालुवाटारमै वसेको छ ।